Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xero ciidan oo ku taalla Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xero...
Faah-faahin cusub oo ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xero ciidan oo ku taalla Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo maanta lala beegsaday xero Ciidanka Xoogga dalka ay ku leeyihiin oo ku taalla dhabarka dambe xarunta Xisbiga iyo Stadium Muqdisho.
Ugu yaraan 6 Askari oo uu ku jiro darawalkii Jeneraal Tareedisho ayaa la sheegay inay halkaasi ku dhinteen, waxaana dhaawac ah ku dhawaad 10 Askari iyo dad shacab oo ka agdhawaa xerada Ciidanka ee weerarka Ismiidaaminta lagu qaaday.
Goobaha Caafimaadka ee gurmadka deg dega ayaa xaqiijiyay in sidoo kale dhaawacyo ay kasoo qaadeen goobta uu weerarku ka dhacay.
Xeradan waxaa degan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan Guutada 27aad ee Militariga Soomaaliya oo uu Taliye u yahay Generaal Tareedisho oo ka mid Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya.
Gaariga lagu dhex qarxiyay xerada ayaa noociisa waxaa lagu sheegay Nooha, waxaana ka xeynaayay naftii halige gudaha xerada galiyay gaariga, iyadoo halkaasi uu ka dhashay Khasaare soo gaaray ciidamada.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada weerarka lagu qaaday Ciidanka dowladda, waxaana ay sheegeen qof ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab oo waday gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu galay xeradda.